Degso World of Warplanes loogu talagalay Windows
Degso World of Warplanes
Degso World of Warplanes,
World of Warplanes waa bilaash si loogu ciyaaro ciyaarta dagaalka diyaaradaha ee internetka. Wargaming.Net, oo aan sidoo kale ka naqaano World of Tanks, oo ah soosaaraha ciyaarta ciyaarta MMO ee ciyaarta xorta ah lagu ciyaaro.
Mawduuca Dagaalkii Labaad ee Adduunka, oo ahaa mawduuca dagaalladii diyaaradaha ee ugu weynaa ee soo mara dunida. Ameerika, Ruushka, Jarmalka iyo Japan ayaa noqda ummadaha ciyaarta ku jira. Ummad waliba waxay leedahay geed tikniko ah (geedka xirfadda). Marka la eego kuwaan, horumar dhab ah ayaa la soo bandhigaa. Waxay ku jirtaa gacmahaaga si aad u baarto oo ula dagaallanto ku dhawaad ​​dhammaan diyaaradihii duulay intii u dhaxaysay 1930 iyo 1950. Gaar ahaan, waxaad baran doontaa waxa loola jeedo dagaal -ku -la -dagaallanka dagaalladaas.
Waxaa jira 4 qaabab oo kala duwan ciyaarta: Dagaal caadi ah, hal dagaal, tababar iyo tababar kooxeed. Si kastaba ha ahaatee, waxaa suurtogal ah in qaybahaas loo qaybiyo hab dagaal iyo hab tababar. Kuwan;
Qaabka Dagaalka: Waa qaybta dagaalka ugu weyn oo ay ku jiraan 2 kooxood oo min 15 diyaaradood ah. Waxaad isku dayeysaa inaad ka adkaato diyaaradaha cadowga oo ah ciyaartoy dhab ah oo kula mid ah. Dagaalku ma socdo wax ka badan 15 daqiiqo. Khariidadda ciyaarta iyo ciyaartoydu si aan kala sooc lahayn ayaa loo doortay. Waxa kale oo la odhan karaa Teammatmatch. Laakiin sida dheeraad ah, waxaad isku daydaa inaad burburiso saldhigyada cadaawayaashaada dhulka.
Qaabka Tababarka: Waxaad u isticmaashaa qaybtan si aad naftaada u hagaajiso. Waxaad kaloo ku tababari kartaa iskaashi kooxdaada. Cadaawayaashaadu waxay noqdaan bots (caqli macmal ah).
Ciyaarta; Waxaa jira 4 nooc oo diyaarado ah: Dagaalyahan, Dagaalyahan Culus, Diyaaradaha Weerarka iyo Fighter-ku-saleysan. Waxay ku socotaa iyada oo aan la sheegin inay jiraan noocyo badan oo kuwan ah. Intaa waxaa dheer, xulashooyin badan oo habaynta ayaa adiga kaa sugaya, bambooyin ilaa hub, xabbado ilaa gantaallo, matoorro ilaa midabyo.
Dunida Diyaaradaha Dagaalka, waxaad ku qaadataa waqtigaaga diyaaradaada hangar marka laga reebo dagaalada. Halkan;
Waxaad dooran kartaa diyaaraddaada oo waxaad bilaabi kartaa dagaal.
Waxaad dayactiri kartaa diyaaradahaaga.
Waxaad u iibsan kartaa qaybo, agab diyaaraddaada oo aad hagaajin kartaa dhammaan alaabtaada.
Waxaad maamuli kartaa koontadaada.
Waxaad la hadli kartaa ciyaartoy kale.
Waxaad ku arki kartaa tirakoobkaaga dagaalka oo leh dhammaan faahfaahinta.
World of Warplanes Noocyada